Imibuzo Evame Ukubuzwa - Tianjin YR Chemspec Technology Co., Ltd.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakishwa kokuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzisa ukupakisha okukhethekile kwezingozi ezimpahleni eziyingozi kanye nabathumeli abaqinisekisiwe besitoreji esibandayo ezintweni ezizwelayo kukushisa. Izimfuneko zokupakishwa kochwepheshe nezingajwayelekile zingase zibize inkokhiso eyengeziwe.
Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola impahla. I-Express ngokuvamile iyindlela eshesha kakhulu kodwa futhi ebiza kakhulu. I-Seafreight iyisixazululo esingcono kakhulu samanani amakhulu. Izilinganiso ngqo zempahla singakunikeza kuphela uma sazi imininingwane yenani, isisindo kanye nendlela. Sicela usithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.